Tsy misy tokotaniny izay fampandrosoana… | NewsMada
Tsy misy tokotaniny izay fampandrosoana…
Fanarenam-pirenena, fanatsarana ny fiainam-bahoaka, fampandrosoana… Tsy hita be ihany, na naman’ny tsy misy tokotaniny. Taon’ny asa ity taona ity. Mby aiza? Efa azo na ho azo ny vola, eo ny hoe fahamarinan-toerana sy fitoniana politika fa tsy mihetsika firy ny mpanohitra: tsy omena toerana eny amin’ny parlemanta, tsy avela hidina an-dalambe.
Inona no antony tsy mbola hirosoana amin’ny fanarenam-pirenena, fanatsarana ny fiainam-bahoaka… ? Lany andro manala saritaka sy mamono afo ny mpitondra: haintany, fitsaram-bahoaka… Tena atao sy imasoana ve ny asa fampandrosoana? Tsy hita be ihany, tsy maharesy lahatra hoe mitondra inona: tsy araka izay tena hetahetam-bahoaka?
Na misy aza izay lazaina ho hetsika etsy sy eroa, fiatrehana fifidianana filohan’ny Repoblika no zava-dehibe mahamaika ny sasany. Tavela amin’izay ny hoe fampandrosoana, indrindra ho an’ny vahoaka ifotony. Tsy misy resaka tsinona izay fifidianam-paritra sy ny fifidianam-paritany; eny, ny amin’izay hiandraikitra ny fokontany aza.
Na izay heverina ho vahaolana amin’ny haintany aza, ohatra: mampihomehy, mampalahelo. Fambolena hazo amin’ny tany karakaina tsy mahazo orana. Hahavatra hanondraka? Ny olombelona sy ny voly fihinana aza, sahirana amin’ny rano amin’izao. Vahaolana maika sy azo antoka izao ve ny fambolen-kazo? Na fihetsiketsehana no betsaka…
Hahafoana ny fitsaram-bahoaka koa ve, ohatra, ny fampitandremana ny vahoaka amin’ny tsy fanekena intsony izany? Na ny fampahafantarana ny lalàna amin’ny vahoaka tsy azo antoka raha vita na tsia, na haharitra na tsia… Tsy jerena izay fototry ny olana: tsy fahatokisan’ny vahoaka ny mpitondra? Na mpitandro filaminana, na mpitsara…
Izay vahaolana sy hetsika etsy sy eroa, mitondra ho amin’ny fanarenam-pirenena, fanatsarana ny fiainam-bahoaka, fampandrosoana… ? Tsy misy tokotaniny be ihany aloha izany. Tsy voavaha na ny tsy fandriampahalemana aza, ny delestazy, ny tsy fanjarian-tsakafo, ny haintany… Mandra-pahoviana no iaretana sy iforetana amin’izao?